အသားအရေအတွက် တကယ်အကျိုးရှိမယ့် Physicians Formula ရဲ့ The perfect MATCHA!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » အသားအရေအတွက် တကယ်အကျိုးရှိမယ့် Physicians Formula ရဲ့ The perfect MATCHA!!
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ မိတ်ကပ်ဖျက်တဲ့အခါမှာ ဂွမ်းတွေ အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မယ့် The Perfect Matcha 3-in-1 melting cleansing Balm လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Balm ပုံစံအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသားအရေပေါ်အလွယ်တကူ တင်ပြီး အသာအယာပွတ်ပေးရုံဖြင့် သန့်စင်နိုင်ပါတယ်။
အသားအရေကို စိုပြေစေပြီး Antioxidant ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ Matcha Green Tea, Bamboo Shoot, Lotus Extract တို့ပါဝင်ပါတယ်။3in 1 cleansing balm ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖျက်ရခက်တဲ့ မိတ်ကပ်မျိုး ဒါမှမဟုတ် အထပ်ထပ် လိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်မျိုးကိုပင် အသားအရေ ပွန်းတိုက်ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေဘဲ တခဏချင်းသန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ချွေးပေါက်အတွင်းပိတ်ဆို့နေတဲ့ အညစ်အကြေးများကိုပါ တပါတည်း သန့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုပြီးနောက်မှာ အသားအရေဟာ သန့်ရှင်းကြည်လင်ပြီး ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
ဗူးထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ပမာဏကို ချင့်ချိန်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဇွန်းပါးလေးတခုပါဝင်တာကြောင့် ဇွန်းလေးကို အသုံးပြုပြီးလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုယူကာ မျက်နှာအနှံ့ကို စက်ဝိုင်းသဏ္ဍန် ညင်သာစွာပွတ်တိုက်ပေးရပါမယ်။ မျက်ဝန်းတဝိုက်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့အခါ မျက်လုံးအိမ်ထဲ မဝင်ဖို့ရန်တော့ ဂရုစိုက်အသုံးပြုပေးရပါမယ်။
ပြီးနောက်မှာတော့ ရေနဲ့ဖြစ်စေ ရေစိုအဝတ်နွေးနွေးဖြင့်ဖြစ်စေ သုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ချွေးပေါက်သန့်ရှင်းပြီး အဆီဖုကင်းတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ရစေမှာပါ။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 13$ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။